Plastic isikhunta umjovo udini bavumelane mkhuba yentuthuko esikhathini esizayo - Aojie Isikhunta Co., Ltd.
Plastic isikhunta umjovo udini bavumelane mkhuba yentuthuko esikhathini esizayo
Manje ukuthambekela komphakathi, ukuthuthukiswa kwesikhunta kuyashesha kakhulu. Plastic isikhunta umjovo ukucutshungulwa sithandwa kakhulu ngabantu. Ngaphansi kwethemba lemakethe, ikusasa lingalindelwa. I-Shandong Zheng's Plastic Mold Factory ivumelana nokuthuthuka kwezikhathi, futhi ubuchwepheshe bayo buyathuthuka ngokushesha.
Isimo samanje sokuthuthukiswa komjovo wesikhunta isimo samanje sokwakhiwa komkhakha wemboni wepulasitiki waseChina sihlangabezane nesikhathi esingaphezu kwengxenye yekhulu leminyaka, futhi senze inqubekela phambili enkulu. Esikhunjini esikhulu, sikhiqize isikhunta esingu-48 Inch screen color plastic shell injection mold, 6.5kg umshini wokuwasha umthamo omkhulu, isikhunta esiphelele sepulasitiki, kanye nobhampa wemoto nesikhunta sepulasitiki sedeshibhodi. Mayelana nokunemba kwesikhunta sepulasitiki, sikwazile ukukhiqiza izingxenye zepulasitiki nezikhunta zamakhamera. Cavity module encane igiya isikhunta futhi isikhunta plastic.
Njengamanje, isikhunta somgijimi oshisayo siye sathandwa kancane kancane, futhi kwasetshenziswa ngaphezu kwama-20% kwamanye amafektri. Imvamisa basebenzisa ukushisa kwangaphakathi noma imishini yokugijima eshisayo yangaphandle, kanye nezinga eliphakeme lomhlaba lezinsimbi zomgijimi oshisayo wezinaliti ezinzima. Izinga eliphakeme lomhlaba lesikhunta somgijimi oshisayo wenaliti. Kodwa-ke, isilinganiso sokutholwa komgijimi oshisayo ngokuvamile singaphansi kuka-10%, okuhluke kakhulu kunaleso sika-50% kuya ku-80% phesheya.
Ukusetshenziswa kwe-CAD / CAE / CAM ngentuthuko esheshayo yomkhakha wokukhanya kanye nokwenziwa kwezimoto, ukwakheka kwesikhunta bekukhathazeka kabanzi, futhi kwakha imboni. Kodwa-ke, imboni yesikhunta yaseChina ukuntuleka kwabasebenzi bezobuchwepheshe, okuhlukahlukene, ukunemba okuphansi, umjikelezo wokukhiqiza omfushane, impilo emfushane, ukutholakala okuncane. Ezinye izikhunta ezinkulu, eziyinkimbinkimbi nezinkimbinkimbi azikwazi ukwenziwa ngokwazo. Kuthatha izigidi kanye namashumi ezigidi zamadola ukungenisa kusuka phesheya minyaka yonke, okubeka umkhawulo entuthukweni yomkhakha wesikhunta. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthuthukisa umkhakha wesikhunta. Ukuze uthuthukise izinga lokuklama nokucubungula ikhono lamabhizinisi wesikhunta. Uhlelo lwe-CAD / CAE / CAM olunconywe yi-China Die & isikhunta inhlangano ilungele i-Die & Mold Company kanye nemboni kazwelonke ye-die & mold.
Uhlelo lwe-CAD / CAE / CAM lokuklama isikhunta kanye nemishini aludingi uhlelo olukhulu kakhulu, kepha ludinga izidingo eziphezulu kwezinye izici, ezinjengokumodela kwaphezulu kanye nemishini ye-axis emithathu ye-CNC. Yize ezinye izinhlelo zangaphandle ze-CAD / CAE / CAM zinemisebenzi enamandla ye-3D surface modeling, i-structural finite element analysis, i-computer esiza ukukhiqiza nokuphathwa kwedatha yomkhiqizo, kuyabiza futhi kunzima ukukuthwala ezinkampanini ezijwayelekile.
Isikhunta seplastikhi yokucubungula umjovo wepulasitiki ngaphambili kwentuthuko yezikhathi, ekuthambekeni komoya, ikusasa lingalindelwa.